Arylọ ọrụ Akaryn na-ebupụta ebe ntụrụndụ ọhụrụ na Indonesia na Vietnam
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Arylọ ọrụ Akaryn na-ebupụta ebe ntụrụndụ ọhụrụ na Indonesia na Vietnam
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Akaryn Hotel Group, onye na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ mara mma nke Thailand, na-akwadebe ịgbasa nku ya wee banye ahịa mba ụwa na nke mbụ ya, na mwepụta nke aha ndị ọbịa ọsụ ụzọ na Indonesia na Vietnam.
N’ọnwa ndị na-abịanụ, echiche abụọ banyere otu ụlọ oriri na nkwari ga-eme mbupụta nke mba ha. Aleenta, ụdị okomoko ụkwụ akpụkpọ ụkwụ mbụ nke ewepụtara na Thailand na 2004, ga-ewebata Bali, "Island of Gods" nke Indonesia, na akyra, ụdị ahịa na-ewu ewu, ga-abata na Hoi An, UNESCO World Heritage- depụtara ọdụ ụgbọ mmiri obodo Central Vietnam.
Aleenta Retreat Bali ga-abụ ebe nsọ nke mmụọ n'ime ugwu ugwu agwaetiti a, oge elekere si Ubud. Emebere n'ụdị ala Balinese dị ala gboo, izu ike ịdị jụụ a ga-adị otu nde maịl site na ebe ndị njem na-ekwo ekwo na ndịda agwaetiti ahụ. N'ịbụ nke dị n'ugwu, nke ugwu na-ekpuchi ugwu, ọmarịcha ụzọ a ga-eme ka ndị ọbịa nwee ike izuike ma jikọta ibe ha na paradaịs.
Obodo spa na ebe ezumike yoga, Aleenta Retreat Bali ga-enwe ebe Ayurah Wellness sara mbara, ebe ndị ọbịa nwere ike ịmị ọtụtụ usoro ọgwụgwọ dị jụụ, gụnyere ịhịa aka ọdịnala Balinese na ọgwụgwọ okike. Mpaghara yoga nke dị n'èzí ga-eleghara ọdọ mmiri ndị na-atụgharị uche anya yana ebe mgbatị ahụ ga-eme ka ndị ọbịa nwee mgbatị ahụ na-enye ume na paradaịs.
Ndị ọbịa ahụ ga-enwe ọtụtụ ohere ịpụ ma chọpụta mpaghara mpaghara ahụ, gụnyere Ubud, isi obodo ọdịbendị Bali. Aleenta Retreat Bali ga-enyekwa ọnọdụ mara mma maka agbamakwụkwọ na ọrụ, yana nhọrọ nke ime ụlọ ma ọ bụ ihe omume alfresco.
“Aleenta bụ aha mbụ anyị na ụlọ ọrụ ọsụ ụzọ anyị na Phuket na Hua Hin abụrụla nke ndị ọbịa na-ewu ewu. Ezubere ihe onwunwe Aleenta ọ bụla iji gosipụta amara na agwa mgbe niile ebe ọ na-aga, na-egosipụta nnukwu ebe obibi na ụlọ ọrụ ụwa ka ha na-arụkwa ọrụ na gburugburu ebe obibi. Aleenta Retreat Bali ga-abụ ihe dị egwu na mgbakwunye na pọtụfoliyo anyị; zoro ezo, nke mmụọ na nke anụ ahụ, ebe nsọ a dị ebube ga-enye ndị ọbịa ohere ịchọpụta ezigbo agwaetiti nke Chi, ”ka AKARYN Hotel Group's Founder and Managing Director, Anchalika Kijkanakorn kwuru.
Imepe uzo ya na 2019 bu akyra Hoi An, uzo ozo di omimi nke di n'etiti etiti obodo Hoi An na odo odo nke China. Dabere na mmiri nke Bon Bon, a ga-enwe ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ mmiri banye na ndagwurugwu a dị elu, ma ọtụtụ n'ime ụlọ 110 mara mma na ọdọ mmiri ọdọ mmiri ga-anọdụ ala na mmiri.
Ndị ọbịa nwere ike ịnọdụ ebe a mara mma na klaasị yoga ụtụtụ, ọgwụgwọ spa na Ayurah Wellness center, itinye na onsen ma ọ bụ mgbatị ahụ na ebe mgbatị ahụ nke oge a. N'aka nke ọzọ, ha nwere ike ịdaba n'ime ọdọ mmiri na-adịghị mma.
akyra Hoi An ga-enye nguzozi zuru oke n'etiti nyocha ọdịbendị na izu ike ebe okpomọkụ; obodo mara mma nke Hoi An, ya na ihe nketa ya dị iche iche na ihe owuwu na-adọrọ adọrọ, dị nso, ma ebe ájá ọla edo na oke osimiri azure nke Central Vietnam dịkwa mfe. Ọ ga-enyekwa ọnọdụ pụrụ iche maka ihe omume na agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ.
“Site n’okporo mmiri ya dị jụụ ma dịkwa mma, ọkara obodo na oke osimiri ahụ, akyra Hoi An ga-enye ndị ọbịa ohere ịchọpụta ihe niile ebe a mara mma ga-enye. Ndị ọbịa enwetara ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ akyra na Bangkok, Phuket na Chiang Mai ga-amata ụdị ejiji na-ewu ewu. Anyi na-ele anya iwebata ndi obia n’oge ohuru a, nke ile ndi mmadu obia n’ulo a, ”Anchalika kwukwara.
Akaryn Hotel Group na-arụ ọrụ ugbu a nchịkọta nke ụlọ ahịa na ebe ntụrụndụ mara mma na Thailand, gụnyere Aleenta Hua Hin-Pranburi, Aleenta Phuket-Phang Nga, akyra Beach Club Phuket, akyra Manor Chiang Mai, akyra Thonglor Bangkok na mgbakwunye kachasị ọhụrụ na pọtụfoliyo ya , akyra TAS Sukhumvit Bangkok. Ndị otu a ga-aga n’ihu na-ewebata ụdị ọmarịcha aha ya nke ile ọbịa nke Asia na ọtụtụ ebe ndị ọzọ gafere mpaghara ahụ na ọnwa na afọ ndị na-abịa.
2021 NYC White Label Expo Onye ndu na -emepụta ...